Madaxfurasho laga dalbaday markabkii lagu qafaashay xeebaha Soomaaliya - BBC News Somali
Madaxfurasho laga dalbaday markabkii lagu qafaashay xeebaha Soomaaliya
Xigashada Sawirka, Maxamed Deeq
Waa markabka la afduubtay oo taagan badda dhexdeeda
Koox hubeysan oo xeebaha Soomaaliya ka qafaashay markab sida shidaal Isniintii ayaa dalbaday madaxfurasho, sida uu shaaciyay hawlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeeda.
Maraakiibta dagaalka ee Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa xiriir la sameeyay ragga hubeysan ee afduubtay markabaasi oo lagu magacaabo Aris 13 oo ay maamusha shirkad fadhigeeedu yahay Imaaraadka Carabta.
Burcad badeeda ayaa la sheegay inaysan faahfaahin ka bixinin inta ay dhantahay madaxfurashada ay dalbanayaan.
Haweeney musharrax madaxweyne aheyd oo dalkeeda uga carartay carruuteeda dartood
"Doorashooyinka la filayo iyo saameyntooda wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland"
Maxay ku muteysatay Qorsho Xasan inay noqoto macallinka ugu wanaagsan Minnesota?
Godka la hilmaamay ee laga qoday macdanta laga sameeyay nukliyeerka
“Aniga oo aabbahay aasayo ayaa geerida hooyadeyna la ii soo sheegay”
Ronaldinho: Xiddigii Brazil iyo Barcelona iyo sida uu ugu dambeeyay xabsiga